2013-06-09 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
IN Converter - ON Saturday, June 15, 2013 No comments
Format Factory ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲကိုတော့ ကွန်ပျူတာသုံးသူတိုင်း သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ Free
သုံးခွင့်ပေးထားတဲ့ Freeware လေးဖြစ်ပေမယ့် တော်တော်ကို အဖိုးတန်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဆော့ဝဲကို Free သုံးခွင့်ပေးထားတဲ့ Developer ကို တော်တော်လေးချီးကျူးမိပါတယ်
ဒီဆော့ဝဲလေးကိုသုံးပြီး File Format တွေကို တစ်မျိုးကနေတစ်မျိုး အလွယ်တကူနဲ့ပြောင်းပစ်နိုင်ပါတယ်
ဥပမာ .. ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ VCD သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို Ipad လေးထဲမှာထည့်ပြီးနားထောင်ချင်တယ်ပေါ့
ဒီတော့ အဲဒီ VCD သီးချင်းကို All to 3GP တို့ All to mobile devices တို့အဖြစ် FileFormat ပြောင်းပေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Ipad လေးထဲကို ပြောင်းထည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့အဲဒီလိုပဲပေါ့
ဗီဒီယိုသေးသေးလေးတစ်ခုကို .gif ဖိုင်လေးအဖြစ် ပြောင်းပစ်ချင်ရင်လည်း ရတာပါပဲ အဲ Version 3.0 ကစပြီး ပိုတိုးလာတဲ့ Feature ကတော့ Video Joiner နဲ့ Audio Joiner တို့လိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေ အသံဖိုင်တွေကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်ပေးတဲ့ Feature တွေပါပဲ Freeware ဆိုပေမယ့်
တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Download ယူဖို့ အခက်အခဲလေးတွေ ရှိနေတတ်တာကြောင့်
ကျွန်တော်ဒေါင်းယူထားတာကိုပဲ ပြန်တင်ပေးထားလိုက်ပါတယ် အခုတင်ပေးထားတာကတော့ Format Factory 3.1 ပါ ဒီဗားရှင်းမရှိသေးလို့ လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
ဒေါင်းပြီးရင် အေးအေးဆေးဆေး Install လုပ်ပြီး အသုံးပြုရုံပါပဲဗားရှင်းအဟောင်းကို Install လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေရင်လည်း ပြန်ဖြုတ်စရာမလိုပါဘူးဒီဗားရှင်းကို Install လုပ်လိုက်တာနဲ့ သူ့အလိုလို Upgrade လုပ်ပေးသွားမှာပါ Install လုပ်တဲ့နေရာမှာဗဟုသုတဖြစ်တစ်ခုလောက် ပြောပြချင်ပါသေးတယ်
မသိသေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပေါ့ Freeware တွေကို Install လုပ်တဲ့နေရာမှာ သူတို့နဲ့အတူ ကပ်ပြီးထည့်ထားတဲ့ ပရိုဂရမ်လေးတွေပါလာလေ့ရှိပါတယ်ဒါကလည်း ဆော့ဝဲတွေကို Free ပေးနေတဲ့ Programmer တွေအတွက် စီးပွားရေးတစ်မျိုးမို့ အပြစ်ပြောလို့မရပါဘူးအသုံးပြုသူကသတိထားပြီး သုံးဖို့ပဲ လိုတာပါဒါကြောင့် အဲဒီလိုဆော့ဝဲတွေကို Install လုပ်တဲ့အခါမှာ သတိနဲ့ Install လုပ်ပါ ဥပမာ .. အခု Format Factory ကို Install လုပ်တယ်ဆိုပါတော့အောက်ကအဆင့်လေးရောက်ရင် သတိထားပါ ...
အဲဒီ အမှန်ခြစ်လေးတွေတပ်လျက်နဲ့ Next ကိုနှိပ်လိုက်မိတယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Browser တွေမှာ Ask.com ဆိုတဲ့ Add-on လေးတစ်မျိုး ကပ်ငြိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်သူက User ရဲ့ Privacy ကို အနှောင့်မပေးနိုင်ပေမယ့် .. သူနဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့ ကြော်ငြာဆိုဒ်တွေအတွက် Click လေးတွေတိုးအောင်
ဖန်တီးပေးထားတဲ့ Add-On တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ရှိနေတဲ့ Connection Speed ကို အပြည့်မ၀ မသုံးနိုင်တော့ပဲ အင်တာနက်လိုင်းတွေ တဖြည်းဖြည်းနှေးကွေးလေးလံလာစေပါတယ်
အခုလို Ask.com Search Engine ဟာ အင်တာနက်သုံးသူ ၁၀ယောက်မှာ ၆ယောက်လောက်ရဲ့ Browser ထဲမှာ ကပ်ငြိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် အဲဒီ အမှန်ခြစ်လေးတွေကို ဖြုတ်ပြီးမှ Next ကို နှိပ်ပြီး ဆက်သွားပါ ..ဒါက အခု Format Factory အတွက်ပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူး .. တခြား Freeware တွေကို Install လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း အခုလိုမျိုး သတိထားနိုင်အောင် ပြောပြတာပါ
ကဲ ... Format Factory ဗားရှင်းအသစ်လေးနဲ့ လန်းလိုက်ကြပါဦး
Format Factory isafree multifunctional media converter. Provides functions below: All to MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF/MKV. All to MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV. All to JPG/BMP/PNG/TIF/ICO/GIF/TGA. Rip DVD to video file , Rip Music CD to audio file. MP4 files support iPod/iPhone/PSP/BlackBerry format. Burn in subtitles from srt/mkv. Source files support RMVB. Based on free software like ffmpeg. WARNING: Format Factory includesacodec pack(optional) that might cause problems with other video software on your computer. NOTE!Format factory is ADWARE, optional browser toolbar.
IN Cleaner - ON Saturday, June 15, 2013 No comments
ဒါလေးကတော့ Total Video Converter Update လေးပါ..။ ဖိုင်ဆိုက်ဒ်လေးကလဲ 10MB ပဲရှိပါတယ် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး လေးနဲ့ Format တော်တော်များများကိုလဲ Convent လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်... အောက်မှာ ဆက်လက် လေ့လာလိုက်ပါ..
IN Cleaner - ON Thursday, June 13, 2013 No comments
အဖြစ် အသုံးပြုလို့ရအောင် Keygen ဖိုင်ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်မျာ.. ဒီ Version အသစ်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာတဲ့ Function တွေအပြင် မိမိနှစ်သက်ရာ Theme ပြောင်းသုံးလို့ရလာတာကလည်း အမြင်ဆန်းသစ်ပြီး သဘောကျစရာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ကြပါဗျာ..။
IN Downloader - ON Thursday, June 13, 2013 No comments
IN Speed up window, Windows ဆိုင်ရာ - ON Thursday, June 13, 2013 No comments
Fix ပြန်လုပ်ပေးတာတွေကိုထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် ဆော့ဝဲလေးပါဝင်းဒိုးစနစ်ကြီးရဲ့Registry
ပိုင်းမှာ Error တွေ များလာမယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာဟာလည်း တစ်နေ့တစ်ခြား အသုံးပြုရတာနှေးကွေးလေး
လံလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိတဲ့ Registry ပိုင်းကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပြုပြင်ပေးမယ့်
ဆော့ဝဲတစ်မျိုးလောက်တော့ Install လုပ်ထားသင့်ပါတယ်ကဲလိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအောက်မှာ
Download>>>solidfiles (or) uppit (or) zippyshare (or) ge.tt (or) dropbox
Full Version ဖြစ်အောင်Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို patch file ကို copy-paste နဲ့ ထည့် ၊လိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ.
IN Gtalk/Gmail နည်းပညာများ - ON Thursday, June 13, 2013 No comments
Gmail Notifier Pro က Mail Acc တွေအများကြီး တပြိုင်တည်းဝင်ထားလို့ရတဲ့အပြင် Facebook အပါအဝင် အခြားနာမည်ကြီး Social Mail တွေကိုလည်း ဝင်ရောက်ထားနိုင်ပါတယ် မိမိ Mail ထဲဝင်ရောက်လာသမျှကို Browserကနေဖွင့်စရာမလိုပဲ ဒီကောင်လေးကတဆင့် အလွယ်တကူ
ဝင်ရောက် ပြင်ဆင် Edit လုပ်လို့ရပါတယ်အသုံးပြုနည်းကို ဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီး ကြည့် နိုင်ပါတယ်
OS: Windows XP/Vista/7 Home Page: www.gmailnotifier.se
IN Utilities - ON Thursday, June 13, 2013 No comments
cFosSpeed 9.05 Build 2066 Beta with Trial reset
IN Speed Up Internet - ON Thursday, June 13, 2013 No comments
တင်ပေးတဲ့အပြင် File Sharing လုပ်တာ၊ Online Game ဆော့တာ, VoIP သုံးတာ နဲ့ အင်တာနက်ကနေ Mediaဖိုင်တွေကိုကြည့်ရှုအသုံးပြုတာတွေကို မြန်ဆန်သွက်လက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲပါအသုံးပြုလို
IN Speed Up Browser, Speed Up Internet - ON Thursday, June 13, 2013 No comments
ဒါကတော့ မိမိတို့ရဲ့ Internet Browser တွေမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့History,Cookies,
စတဲ့အခြားသူတွေခြေရာခံလို့ရတဲ့ ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။အခြားအသုံးဝင် Tools တွေလည်းပါဝင်တာကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ Information တွေကိုလုံခြုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့
ကောင်လေးပါ။ဒါ့အပြင် မလိုအပ်တဲ့ temp files , dat file , recycle bin စတာတွေကိုဖျက်ပေးပြီး
ကွန်ပြူတာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလဲ မြှင့်တင်ပေးပါတယ်... ကျန်တာတွေကို အောက်မှာဆက်လက်လေ့
• Select which cookies you want to keepv
IN Photo and Media Editor Tools - ON Thursday, June 13, 2013 No comments
ဓာတ်ပုံတွေ..Video တွေကို Slide Show ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက်ပါခင်မျာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြုလုပ်နိုင်
ကြမှာဖြစ်ပါတယ်...Full Version ဖြစ်အောင်Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။
ပြီးရင်တော့ဒေါင်းလော့ယူထားတဲ့ဖိုင်ထဲက Registration.reg လေးကိုနှစ်ချက်ကလစ်ပြီး yes နှိပ်ပြီး ok
ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ..လိုအပ်သူများ Download
Some of your friends or family werenвЂ™t there to watch your slideshow? No problem
Just upload your slideshow to YouTube and show your loved ones or even the whole world the places you went to, the most unforgettable moments or anything thatвЂ™s important to you.
I s so easy to create your own slideshow:
With onlyafew mouse clicks you can create spectacular slideshows according to your wishes from, for example, birthday, holiday or wedding pictures. You can add background music, texts, subtitles or themes, or edit transition settings and lots more With Ashampoo Slideshow Studio HD2itвЂ™s possible to edit the transition duration and effect for each photo individually. Make your slideshow even more personal by adding credits at the beginning or at the end of your show
Output formats Regarding output formats and media you can choose from even more variants.
Ashampoo Slideshow Studio HD2offers various output formats like for example MPEG-4, MPEG-2 oraFacebook compatible format. BurnaDVD or Blu-ray Disc in HD quality (720p or 1080p and then show your slideshow onaTV or beamer projector. You could also share your great results withalarger audience Ashampoo Slideshow Studio HD2gives you the opportunity to upload your slideshow to YouTube automatically
– In the slideshow editor several elements, for title, subtitles, graphics or themes, can be added toaslideshow. The new slideshow effects and elements in Ashampoo Slideshow Studio HD2contribute to make slideshows more interesting, personal and appealing
– Ashampoo Slideshow Studio HD2offers various new automated KenBurns Effects
VideoLAN VLC Media Player 2.0.7 (x32 / x64) for windows (6/10/2013)
IN Multimedia Tools - ON Wednesday, June 12, 2013 No comments
VideoLAN VLC 2.0.7
ဒါကတော့ အထွေအထူးပြောစရာမလိုအောင်အားလုံနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား Media Player လေးပါ..။
အခု Version အသစ်ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ..။
2.0.7 specific changes
**Quote by :
Symantec Norton Utilities 16.0.0.126 Full with patch
IN Optimizer - ON Wednesday, June 12, 2013 No comments
Symantec Norton Utilities 16.0.0.126 | 22 MB
အခုနောက်ပိုင်း Antivirus တွေလည်း ဆိုင်ရာ Optimizer လေးတွေ ပြုလုပ်လာကြတာတွေ့၇ပါတယ်။
Symantec ဆိုတာကတော့ Antivirus လောက ရဲ့ ဦးဆုံးလို့ဆိုရလောက်တဲ့ ဝါရင့် Antivirus Company
ဖြစ်ပြီး PC ထိန်းသိမ်းမှု ဆော့ဖ်ဝဲကိုလည်း စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ Antivirus နဲ့ Virus ရှင်း
လင်းပြီးတဲ့အခါ မူမမှန်တော့တဲ့ System file တွေ ကို ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
IN Internet Tools - ON Wednesday, June 12, 2013 No comments
Longtion AutoRun Pro Enterprise 13.1.0.351 full with keymaker
IN Programming tools - ON Wednesday, June 12, 2013 No comments
ရှေ့မှာတင်ပေးဖူးပါတယ်.. အခု နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းလေးမို့ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ပဲ ဒီ Program ကိုတည်ဆောက်ထားသလိုလို မိုက်တော့မိုက်တယ်။
စသုံးတဲ့အခါ နည်းနည်း ရှုပ်ထွေးသယောင် ရှိပေမယ့် နားလည်သွားရင် သုံးရတာတကယ်အဆင်
ပြေတယ်ဗျို့ ...။ ကျွန်တော်တောင် စမ်းနေရင်းသဘောကျသွားလို့ အားလုံးကိုပြန်ပြီးမျှဝေပေး
ကဲ... ဘာ Coding မှနားမလည်သူတွေတောင် ဥုံဖွ Programer တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ရင်တော့